फुर्सदमा विहे गर्ने सोच बनाएकी अंकिता, जसको स्वरले देशविदेशकै स्टेज तताउँछ
परिवर्तन देवकोटा मंगलबार, माघ २९, २०७५ मा प्रकाशित
पछिल्लो समय चर्चामा रहन सफल गायीका हुन् अंकिता मगर । रोल्पा बुढागाउँमा जन्मिएकी उनी छोटो समयमा नै देश तथा विदेशमा परिचय जमाउन सफल भएकी छिन् । अहिलेसम्म दर्जन गीतको हाराहारीमा गीतमा स्वर दिएकी उनले गायनकै क्रममा बेल्जीयम, पोर्चुगल, नेदरल्याण्ड लगायतका विभिन्न देशहरुको भ्रमण समेत गरीसकेकी छिन् । सुमधुर स्वरकी धनी मगर अहिले पनि गायनकै लागि पोर्चुगलबाट नेपाल आएकी छिन् । यहाँ रहँदै गर्दा पनि गायनमा निकै व्यस्त देखिएकी गायिका मगरसँग जनतापाटीका लागि परिवर्तन देवकोटाले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनै गायीका मगरसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
यस्तै हो । गीतका लागि थुप्रै अफरहरु आइरहेका छन् । म अहिले पनि गायनमै व्यस्त छु । भर्खरै मात्र सुमन केसी जीसँग डान्सीङ स्टाइलको लोकदोहोरी गीत रेकर्डिङ गरिएको छ । त्यस्तै, संगीतकार/गीतकार बादल घिमिरेको गीत पनि रकर्ड भएको छ । बाहिरबाट आएपछि यी लगायत अन्य गीतहरु पनि गाउने तरखरमा छु ।
गीतकै लागी विभिन्न देशमा तपाईंको डिमान्ड हुन्छ नी, आजसम्म कति मुुलुकका कार्यक्रम जानुभयो ?
विभिन्न देशका कार्यक्रमहरुमा अफर आउँछ । म गई नै रहेको छु । खासमा पनि मैले नचाउने खाले (डान्सिङ स्टाईलका) गीत गाउन रुचाउँछु । त्यसैले पनि धेरै स्टेजमा अफर आउँछ । मैले आजसम्म बेल्जियम, नेदरल्याण्ड, पोल्याण्ड, पोर्चुगल लगायत अन्य विभिन्न देशहरुमा भएको कार्यक्रममा गीत गाएको छु । त्यस्तै, विभिन्न देशमा हुने कल्चरल प्रोगामहरुमा पनि सहभागीता जनाउने गरेको छु । नेपाल आउनुअघि फ्रान्स र स्पेनमा पनि कार्यक्रम तय भएको थियो । तर त्यो कार्यक्रमलाई छाडेर अहिले नेपाल आएकी छु ।
पछिल्लो समयको निकै व्यस्त गायीका हुनुहुन्छ, तपाईं कस्ता गीतहरुलाई प्रायोरिटीमा राख्नुहुन्छ ?
विशेष गरी आजसम्म मैले डान्सिङ गीतहरु बढि गाएको छु । यी लगायत राष्ट्रिय भावना जागृत गराउने, सन्देशमुलक तथा समाज बोल्ने गीतहरु पनि गाईरहेकै हुन्छु । त्यस्तै, लोक–पप टाइपका गीतहरु पनि म गाउन रुचाउँछु । आजसम्म मैले गाएका गीतहरुमा साथी चाहियो, नखाने कसम, मान्छे भने राम्रो छ, जिवन उज्वल बनाउने लगायत के भाको के भाको, तथा तीज गीतहरु, चलचित्रका गीतहरु पनि आएको छुु । यी सबै गीतहरु स्रोता तथा दर्शकहरुले रुचाएका छन् ।
विदेशका स्टेजहरुमा तपाईलाई कत्तिको सजिलो/अप्ठ्यारो महशुस हुन्छ ?
सुरुसुरुमा त निकै असहज लाग्थ्यो । चिनेका थोरै हुन्छन्, नचिनेका मानिसहरुको भिडमा आफुलाई उभ्याउन निकै असहज हुन्थ्यो । अहिले त्यो दुःख पार गरिसकें । अब भने प्राय सबै कार्यक्रमहरु सहज नै लाग्छन् । अझै अन्य साथीहरुले त तोकिएजति पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गर्छन् । मलाई भने त्यस्तो समस्या परेको छैन । सजिलो/अप्ठ्यारो भन्ने कुरा त आफैंमा पनि भर पर्ने रहेछ । आफ्नो प्रस्तुती कस्तो छ, त्यसमा नि निर्भर गर्छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मैले आजसम्म त्यस्तो अप्ठ्यारो फिल गरेकै छैन ।
तपाईं त उमेरले पनि सानै, निकै राम्री पनि । गायनमा पनि निकै सक्रिय हुनुहुन्छ । यसको अलवा मोडलिङ तिर चाहिँ चाहना छैन ?
मैले २/३ वटा भिडियोमा मोडलिङ गरेकी छु । चाहना त हुन्छ नै, किन नहुनु । अझै पनि अफरहरु आईरहेका हुन्छन् । मन लागेको घडिमा मोडलिङ पनि गर्न तयार हुन्छु ।....(हाँस्दै) ।
तपाईको यो सफलताको जस कसलाई दिनुहुन्छ ?
मलाई यहाँसम्ममा ल्याउन सबैभन्दा बढि त मेरो परिवारकै हात छ । मेरो आमा पहिल्यैदेखि गाउनुहुन्थ्यो । गाउँलगायत अन्य गाउँहरुमा उनलाई उनको गायनले नै चिनाएको थियो । त्यस्तै मेरी दुई दिदीहरुले पनि निकै मिठो गाउनुहुन्छ । मलाई पनि उहाँहरुको गायन सुनेर गाउने रहर जागेको हो । त्यसपछि मैले रोल्पाबाट काठमाडौंमा आएर गुरुकुलमा लाक्पा शेर्पासँग संगीत सिकेँ भने गुरुदेव कामतसँग पनि दुई वर्ष संगीत सिकेँ । त्यसैले मेरो सफलतामा मलाई माया गर्ने सबैको भुमिका उल्लेख्य छ । अझै भन्नुपर्दा त, दर्शक तथा श्रोताको नै भुमिका महत्वपूर्ण छ ।
तपाईं पोर्चुगल चाहिँ कहिले फर्कनुहुन्छ ? केही योजना छ ?
आगामी अप्रील महिनासम्म मात्रै नेपाल रहन्छु । त्यसपछि पोर्चुगल जान्छु । त्यहाँ पनि गीतको काम भैरहेको छ । त्यसपछि पनि म कार्यक्रमहरुमा नै व्यस्त हुन्छु, सायद ।
तपाईं अविवाहित हुनुहुन्छ । देशविदेशमा चर्चामा हुनुहुन्छ । यसो हुँदा, विवाहको अफरहरु त पक्कै आएका होलान्, के छ योजना ?
अफर....! विहे गर्ने बेला त भएको जस्तो लाग्दैन । तर पनि अफरहरु चाहिँ आईरहेकै हुन्छन् । तर अहिले मेरो विहे गर्ने योजना छैन । विहे त फुर्सदमा गरौंला नी होइन....हाँस्दै ।
अन्त्यमा, गायन सिक्दै गरेका र सिक्न चाहनेहरुका लागि के भन्नुहुसन्छ ? गायनमा भविष्य देख्नुहुन्छ ?
कडा मेहनत गर्ने र भित्रैदेखि गाउँछु भनेर लागेकाहरु एकदमै सफल भएका छन् र हुन्छन् पनि । ‘तातो खाउँ जल्दै मरुँ’ भन्ने भावनाले गीत गाउने हो भने त के भन्नु । म गायनमा एकदमै सम्भावना देख्छु र त दौडधुप गरिरहेको छु नी ।
परिवर्तन देवकोटाबाट थप
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया, के भन्छन् अर्थविदहरु ? बुधबार, जेठ १५, २०७६
खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष नै भन्छन्ः बजेट कनिका छरेजस्तो नहोस् शुक्रबार, जेठ १०, २०७६
प्रि–बजेट छलफलः समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न कस्तो बजेट आउनुपर्छ ? यसो भन्छन् अर्थविद्हरु सोमबार, जेठ ६, २०७६
मलिका महत : फिल्ममा फ्लप, म्युजिक भिडियोमा हिट
बलिउड स्टारर्सको आग्रह : सपरिवार फिल्म हेर्न हलमा आउनुहोस्
२० वर्षपछि ‘गदर’ को सिक्वेल घोषणा